Zvakawanda Zvavanazvo Zvinozadzisa Kushaya Kwevamwe | Yokudzidza
Nharireyomurindi—Yekudzidza | November 2012
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bicol Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malay Myanmar Ndebele Ndonga Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swati Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
Zvakawanda Zvavanazvo Zvinozadzisa Kushaya Kwevamwe
MUGORE ra49 C.E., Petro, Jakobho, naJohani, “vaya vainzi ndivo mbiru,” vakapa muapostora Pauro nemumwe wake Bhanabhasi basa rokuita. Sezvavaiparidzira vanhu vemamwe marudzi, vaifanira kuramba vachifunga nezvevaKristu vaiva varombo. (VaG. 2:9, 10) Vakazviita sei?
Tsamba dzaPauro dzinoratidza kufunga kwaaiita nyaya iyi. Somuenzaniso, akanyorera vaKristu vokuKorinde kuti: “Pamusoro pokuunganidzira vatsvene zvinhu, sezvandakarayira ungano dzeGaratiya, imi itaiwo saizvozvo. Zuva rokutanga kwevhiki roga roga mumwe nomumwe wenyu ngaatsaure chimwe chinhu ari kumba kwake achichengete, maererano nokubudirira kwaangave achiita, kuti pandinosvika kuunganidza kurege kuitwa panguva iyoyo. Asi pandinosvika ikoko, chero vanhu vamunenge mabvumira netsamba, ndichavatuma kuti vaende nechipo chenyu chomutsa kuJerusarema.”—1 VaK. 16:1-3.
Mutsamba yake yechipiri kuvaKorinde, Pauro akataurazve chinangwa chokuunganidza zvipo. Chaiva chokuti ‘zvinhu zvienzane, zvinhu zvavo zvakawanda kupfuura zvavaida zvizadzise zvevaishayiwa.’—2 VaK. 8:12-15.
Pauro paakanyorera vaKristu vaiva muRoma munenge muna 56 C.E., vainge vava kutopedza kuunganidza zvipo. Akati: “Ndava kuda kuenda kuJerusarema kunoshumira vatsvene. Nokuti vaya vari kuMakedhoniya neAkaya vakafara kugovera zvinhu zvavo nokupa varombo vevatsvene vari muJerusarema.” (VaR. 15:25, 26) Papera nguva pfupi, Pauro akaita basa iroro, nokuti paainge adzokera kuJerusarema uye asungwa ikoko, akaudza Gavhuna weRoma Ferikisi kuti: “Ndakasvika kuti ndiuye nezvipo zvokunzwira ngoni kurudzi rwangu, nezvinopiwa.”—Mab. 24:17.
Mafungiro akaratidzwa nevaKristu vepakutanga anooneka pane zvakataurwa naPauro nezvevaKristu vokuMakedhoniya. Akati “vakaramba vachitikumbira vachiteterera kwazvo kuti vawane ropafadzo yokupa nomutsa.” Muapostora wacho akakurudzira vaKorinde kuti vatevedzere muenzaniso iwoyo. Akati: “Mumwe nomumwe ngaaite sezvaakasarudza kuita mumwoyo make, asinganyunyuti kana achigombedzerwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.” Chii chakaita kuti ungano idzodzo dzive norupo rwakadaro? Dzaisava nechido chokungopa “zvinhu zvizhinji zvinoshayikwa zvevatsvene, asiwo kuti [dzipfumiswe] nokuonga Mwari kazhinji.” (2 VaK. 8:4; 9:7, 12) Zvingava zvakanaka kuti tipewo tichivatevedzera. Zvechokwadi, Jehovha Mwari achakomborera mafungiro akanaka akadaro okufunga vamwe, uye chikomborero chake chinopfumisa.—Zvir. 10:22.
NZIRA DZINOSHANDISWA NEVAMWE KUTSIGIRA BASA ROMUNYIKA YOSE
Sezvaiitwa mumazuva omuapostora Pauro, vakawanda ‘vanotsaura chimwe chinhu’ kana kuronga mari yavanozoisa mumabhokisi ezvipo akanzi “Basa Romunyika Yose.” (1 VaK. 16:2) Mwedzi woga woga, ungano dzinotumira mari iyi kuhofisi yeZvapupu zvaJehovha yomunyika yadzo. Munhu anogonawo kutumira chipo chake kusangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika yake. Kuna muchida zita resangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika yenyu, tapota nyorerai kana kuti fonerai bazi remunyika yenyu. Kero yebazi inogona kuwanika pawww.jw.org. Zvipo zvinogona kutumirwa nomunhu pachake ndeizvi:
ZVIPO ZVAUSINGATARISIRI KUZODZORERWA
Mari, zvishongo kana kuti zvimwe zvinhu zvinokosha.
Tumirai mari yacho kana zvinhu zvacho pamwe netsamba inotsanangura kuti hamutarisiri kuzozvidzorerwa.
CHIRONGWA CHOKUPA UCHIZODZORERWA
Munhu anogona kupa mari kuti ishandiswe asi achizoidzorerwa kana ava kuida.
Tumirai pamwe netsamba muchiratidza kuti munoda kuzoidzorerwa.
HUMWE URONGWA HWOKUPA
Kuwedzera kuzvipo chaizvo zvemari nezvinhu zvinokosha, kune dzimwe nzira dzokupa nadzo pakutsigira basa roUmambo romunyika yose. Dzimwe dzacho dziri pasi apa. Pasinei nokuti muri kuda kupa nenzira ipi, tapota tangai mataura nehofisi yebazi romunyika yenyu kuti rikuudzei kuti panzira dziri pasi apa ndedzipi dzinoshanda munyika yenyu. Sezvo mitemo ichisiyana munyika nenyika, zvinokosha kuti mutange mabvunza vanachipangamazano vezvemitemo uye zvemitero musati masarudza nzira yakanaka yokupa nayo.
Inishuwarenzi: Munhu angaita kuti sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha rizopiwa mari yake yeinishuwarenzi youpenyu kana kuti mari yake yomudyandigere.
Maakaundi Okubhengi: Munhu angaita kuti maakaundi ake okubhengi, magwaro anoratidza mari yaiswa mubhengi, kana kuti maakaundi okurega basa atarisirwe nesangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha kana kuti azopiwa sangano racho kana afa, zvichienderana nezvinodiwa nebhengi romunzvimbo iyoyo.
Mari yeBhizimisi Neyakakwereteswa: Munhu anganyorerana nesangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha kuti paanofa rizopiwa mari yebhizimisi neyaanga akakweretesa.
Zvivako Nenzvimbo: Zvivako kana nzvimbo inotengeseka zvingapiwa sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha sechipo kana kuti, kana iri imba iri kugarwa, anenge apa wacho anogona kuramba achigaramo paanenge achiri mupenyu.
Chipo Chemari Yakawanda (Gift Annuity): Uhwu urongwa hwokuti munhu anopa sangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha chipo chemari yakawanda uye gore negore sangano rozopota richimupa kana kupa mumwe munhu waanenge ati apiwe, kachitsama kavanenge vabvumirana kweupenyu hwose. Anenge apa wacho anoderedzerwa mari yomutero yaanobhadhara mugore raanenge apa chipo chacho.
Zvido Zvenhaka: Sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha ringasiyirwa zvivako kana mari sechido chenhaka chepamutemo. Urongwa uhwu hunogona kubatsira panyaya yemutero.
Sezviri kuratidzwa pachikamu chino chakanzi “humwe urongwa hwokupa,” zvipo zvakadai zvinoda kuti ari kupa wacho anyatsoronga. Pane bhurocha riri mumutauro weChirungu neSpanish rine musoro unoti Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide, rakaitirwa kuti ribatsire vanhu vanoda kutsigira basa reZvapupu zvaJehovha romunyika yose. Bhurocha racho rinotsanangura nzira dzakasiyana-siyana dzokupa zvipo iye zvino kana kuti pakufa. Mashoko ari mubhurocha iri angasanyatsoshanda kwamuri pamusana pemitemo yemitero kana kuti mimwewo yemunyika yenyu. Saka pashure pokuriverenga, munofanira kutaura navanachipangamazano venyu vezvemutemo kana kuti vezvemitero. Vakawanda pavanoshandisa nzira dzakadai dzokupa, zvinoita kuti vakwanise kutsigira basa rechitendero chedu uye rokubatsira vanhu munyika yose, uye pavanenge vachidaro ivo vanobatsirwawo pamutero wavanobhadhara. Kana bhurocha iri richiwanika munyika yenyu, munogona kurikumbira kumunyori weungano yenyu.
Kana muchida mamwe mashoko, munganyorera kana kufonera Accounting Office, pakero iri pasi apa, kana kuti hofisi yebazi romunyika yenyu.
P. Bag WG-5001
Runhare: 0772 136 002/3/4
“Ndidzidzisei Kuita Kuda Kwenyu”
Jesu Akaratidza Muenzaniso Wokuzvininipisa
Vavarira Kuva Muduku Pane Vamwe
Kukanganwira kwaJehovha Kunokubatsira Sei?
Kanganwiranai Nomwoyo Wose
‘Shoko Rakanaka Kupfuura Rainge Rambonzwiwa’
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA November 2012
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA November 2012
Kana uchida kupa chipo
Kupa Zvipo Uchishandisa Foni, Tablet Kana Kombiyuta